Kume ukubhalisa besola uthishanhloko | Isolezwe
Kume ukubhalisa besola uthishanhloko
Isolezwe / 15 January 2013, 2:06pm /
LENA yikhophi yencwadi okuthiwa inamagama othisha obekumele bayiswe kwagoqanyawo, imiyalelo ethathwe enyangeni
OTHISHA behlangene nabazali bezingane zesikole saseMagabheni primary bavimbezele uthishanhloko osabambile bethi abaqali ukusebenza engahambile ngoba esolwa ngokuthakatha ISITHOMBE :BONGANI MBATHA
SIMPHIWE NGUBANE noZANELE MTHEMBU
KUPHAZAMISEKE ukubhaliswa kwabafundi esikoleni iMagabheni Junior Primary ngesikhathi othisha nabazali bevuka umbhejazana befuna ukushaya ibamba likathishanhloko abalisola ngokuba ngundlovukayiphikiswa.
Bekushube isimo kwaze kwalamula ukufika kwamaphoyisa izolo emini ngesikhathi othisha abebeqhinqe ngaphandle kwamagceke esikole befuna uthishanhloko ukuthi aphumele ngaphandle kwesikole ngenhloso yokumtitinya.
Okunye abasola ngakho uthishanhloko ukuphatha ngendlela engagculisi, ukuzenzela umathanda ngempahla yesikole nokungafundisi njengoba esolwa ngokuzitetemukela nesoka lakhe elincane.
Omunye wothisha okhulume naleli phephandaba wangathanda kudalulwe igama lakhe, usole lo thishanhloko ngokuthakatha ethi lesi sikhundla akusona wasithola kungafanele.
Uthe kudliwa imali yesikole bume, ukudla okumele ngabe kunikwa abafundi abaswele kuyiswa kubo kathishanhloko.
“Zolo lokhu ushintshe isheke lika-R15 000 esasiphiwe lona yinkampani ezimele ukuba sithenge izidingongqangi zesikole kodwa wavele wakhithiza izimpahla negilosa yakwakhe ngalo. Izingane ziyahayiza esikoleni ezinye ziyazichamela kodwa uvele azishaye athi zibulala impahla yesikole uma zimbikela kanti uyazi ukuthi otikoloshe bakhe abaphendula izingane izinyemfu,” kusho lo thisha.
Othisha baveze incwadi abathe bayithole kumuntu osondelene nothishanhloko enemiyalelo yenyanga ngothisha okumele bayiswe kwagoqanyawo.
Bonke othisha abangu-15 balesi sikole esiqala kwa-grade R siphele ku-grade 4 bebengafuni ukubeka unyawo esangweni lesikole bethi kukhona izinto ezigqitshiwe.
USihlalo wesigungu esilawula isikole uMnuz Simphiwe Mkhize, uthe bebengawathatheli phezulu lamahlebezi abeshiwo yizingane nabazali ngoba bekungenabufakazi.
Uthe ube nomhlangano onzima abazali bebika usizi abafundi balesi sikole ababhekene nalo ngenxa yemimoya emibi okuthiwa ikulesi sikole.
“Asazi ukuthi yini eyenze kwaba nalo mbhikisho ngoba sivale izikole ngonyaka odlule izinto zihamba kahle. Beziba khona izinkinga kodwa sikwazi ukukhuluma ngazo sizixazulule kodwa le ibukeka ibucayi. Yingakho sibize inyunyana yothisha naboMnyango wezeMfundo ukuthi bangenelele ngoba isimo asisihle esikoleni,” kusho uMkhize.
Uthishanhloko uNksz Lungile Mkhize, obebukeka ethukile ngesikhathi ezihlalele yedwa ehhovisi lakhe, unqabile ukuphawula ngezinsolo ezibhekiswe kuyena wathi akuxhunywane noMnyango ngalolu daba ngoba yena akagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba.
Abebemele inyunyana i-SA Democratic Teachers’ Union bayalele labothisha ukuthi baqhubeke nokubhalisa abafundi bese bevulela uthishanhloko icala emaphoyiseni uma kunezinsolo ezibambekayo.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo esifundazweni uMnuz Sihle Mlotshwa, uthe bebengazi ngalesi sigameko wabe esenxusa othisha bakulesi sikole ukuthi uma benezikhalo mabazethule emahhovisi ezeMfundo ngokushesha.